1998 – Year – Alpha Premium
Apt Pupil ၁၉၈၀ ၀န်းကျင်လောက်တုန်းက အခြေအနေကို နောက်ခံထား ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ The Lord of the Rings နဲ့ The Hobbit ဇာတ်လမ်းတွေမှာ Gandalf အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး Ian McKellen ကို အမေရိကန်မှာ ဇာတ်မြှုပ်ပုန်းရှောင်နေတဲ့ နာဇီ ရာဇ၀တ်သားကြီးတစ်ယောက်အဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တော့ဒ်ဘိုဒင်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ သမိုင်းဘာသာရပ်ကို အလွန်စိတ်၀င်စားသူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကို သံသယရှိလို့ စုံစမ်းမှုတွေလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာကအလိုရှိနေတဲ့ နာဇီ ရာဇ၀တ်သားကြီး ဒူဆန်ဒါဖြစ်နေတာကို သိလိုက်ရပါတော့တယ်။ တော့ဒ်တစ်ယောက် ကျောင်းမှာ မသင်ရတဲ့ နာဇီနဲ့ဆိုင်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို တရားခံပြေးကြီးဆီကို သွားပြီး သူ့မှာ သက်သေတွေ ရှိတယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ကာ ဖြစ်ကြောင်းစုံကို ပြောပြခိုင်းပါတော့တယ်။ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်နဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် အပြန်အလှန် အကြပ်ကိုင်ကြပုံတွေကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
IMDB: 6.7/10 35,263 votes
Mulan (1998) ဒီကာတွန်းရုပ်ရှင်လေးဟာ တရုတ်ပြည်ကြီးမှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ကို ပြန်လည်ပြီး ဇတ်လမ်းဖွဲ့ ရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်… တိုင်းပြည် စစ်ဖြစ်နေချိန်မှာ ယခင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သက်ကြီးစစ်သားဟောင်းများကို ပြန်လည် ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် အကယ်၍ သက်ကြီးစစ်သားနှင့်အရာရှိများက စစ်ထဲ မလိုက်နိုင်အောင် ကျန်းမာရေး ဆိုးဝါးနေခဲ့ရင် အိမ်တွင်ရှိသော သား တူ မြေး ယောင်္ကျားသား တစ်ဦးစီကို စစ်ထဲသို့ ပို့ပေးပါရန် ဘုရင်မင်းမြတ်က အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်… အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ မုလန် ရဲ့ အဖေဆီသို့ ထိုစာချွန်လွှာ ရောက်လာတဲ့အချိန် ကျန်းမာရေး မကောင်းတော့တဲ့ အဖေကို ကြည့်ရင်း တစ်ဦးထဲသော သမီးဖြစ်သူ မုလန် ဟာ ကွယ်လွန်ပြီးသော ဘိုးဘွားတွေ ရဲ့ မှတ်တိုင်များရှေ့တွင် ဆုတောင်းပြီး ဖခင် မသိအောင် ဖခင်စစ်ဝန်တန်ဆာတွေ ခိုးဝတ်ကာ ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်… ယောင်္ကျားလေးကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ပြီး စစ်မြေပြင်ကို ထွက်ခွာသွားသော ဖခင်ချစ်တဲ့ မုလန် လေးကို မြင်တဲ့ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ ဘိုးဘွားများဟာ အရေးပေါ် အစည်းဝေးခေါ်ပြီး မုလန် အား စောင့်ရှောက်ရန် အိမ်စောင့်ထားသော ...
IMDB: 7.6/10 245,018 votes
Following Following (1998) IMDB .========== 7.5/10 Rotten Tomatoes = 81% ” ခင်ဗျား ကားပေါ်မှာ တခြားလူတွေစကားပြော‌နေတာကို နားထောင်ဖူးလား။ ဒါမှမဟုတ်ဗျာ မြေအောက်ရထားလမ်းမှာ တွေ့တဲ့လူတွေကိုဖြစ်ဖြစ် လမ်းပေါ်ကတစ်‌ယောက်ယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံစံ နည်းနည်းလေး ထူးဆန်းတဲ့ပုံစံရှိတဲ့လူကိုဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုတစ်ခုခုကိုပေါ့ သူတို့ဘဝက ဘယ်လိုရှင်သန်နေလဲ သူတို့ ဘာလုပ်သလဲ သူတို့ ဘယ်ကလာလဲ သူတို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာ ခင်ဗျား သိချင်စိတ်မဖြစ်ဖူးဘူးလား။ လူတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ပြုမူကျင့်ကြံပုံကို ခင်ဗျား သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင် စောင့်ကြည့်နေရင်း မေးခွန်းတွေ ထောင်ပေါင်းများစွာ ထွက်လာမယ်။ ကျုပ်က အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကို မေးချင်ခဲ့တာ။ အဖြေတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိချင်ခဲ့တာ။ ဒီတော့ ကျုပ် လူတွေကို နောက်ယောင်ခံလိုက်ပြီး သိရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။” ဒါတွေက ကျွန်တော့် အညွှန်းမဟုတ်ပါဘူး။ Followingထဲက စကားတွေပါပဲ။။ Followingဟာ ခင်ဗျား ဘာတစ်ခုမှမသိဘဲ ကြည့်သွားရင် ပိုအရသာရှိမယ့် ရုပ်ရှင်ပါပဲ။ ခံစားမှုကို။လမ်းကြောင်းပေးစရာမလိုပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလည်း။ရေးစရာမလိုပါဘူး။ ရေးလည်းမရေးတတ်ပါဘူး။ဒီရုပ်ရှင်ကို ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီး ကိုယ်တိုင် Cinematographyပိုင်းပါလုပ်ခဲ့တဲ့ သူက ခရစ္စတိုဖာနိုလန်ပါ။ ဒီဘက်ခေတ် ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်လောကမှာ ရုပ်ရှင်အရေအတွက်နည်းနည်းနဲ့ မှော်ဝင်အောင်ရိုက်တဲ့လူတွေကို လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက ...
IMDB: 7.5/10 83,166 votes
The Truman Show (1998) ဒီကားေလးကေတာ့ IMDB 8.1 ထိရထားတဲ႔ ဟာသမင္းသားၾကီး Jim Carreyရဲ႕ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးပါ စာေရးဆရာမ ဂ်ဳးကလည္း ဘဝဇာတ္ဆရာဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဒီဇာတ္ကားအေၾကာင္း ေရးခဲ႔ဖူးပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအညႊန္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ Truman ဆိုတာက နာမည္ၾကီး TV show ပါ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ မင္းသား Truman က သူဟာသရုပ္ေဆာင္ေနမွန္းမသိပါဘူး သူေမြးကတည္းက ၾကီးမားတဲ႔ စတူဒီယိုထဲမွာ အထည့္ခံရျပီး သူ႔အေၾကာင္းကို တကမၻာလံုးကို တိုက္ရိုက္လႊင့္ေနတာပါ သူ႔ဇနီး သူ႔သူငယ္ခ်င္း ဒါ့အျပင္ သူ႔ရဲ႕မိဘေတြကပါ ဟန္ေဆာင္သရုပ္ေဆာင္ေတြခ်ည္းသာ ဒီလိုအေျခအေနမွာ သူတကယ္စစ္မွန္တယ္ထင္တဲ႔ ေလာကၾကီး ခ်စ္ခင္ရတဲ႔လူအားလံုးက အလိမ္အညာမွန္းရိပ္မိသြားတဲ႔အခါမွာေတာ့… သူရုန္းထြက္ႏိုင္မလား ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဘက္မွလည္း သူယံုမယ့္နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ တားဆီးမွာေအာင္ျမင္မလား ဆိုတာကေတာ့… ဒီဇာတ္ကားၾကည့္ျပီး အေတြးတစ္ခုေလာက္ေတာ့ က်န္ခဲ႔မယ္လို႔ထင္ပါတယ္
IMDB: 8.1/10 904,647 votes
The Big Lebowski The Big Lebowski(1998) IMDB…8.1,,,,,Rotten….83% လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်စ်မြို့မှာ Lebowski ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူ(၂)ယောက်ရှိတယ်….သူတို့က နာမည်သာ တူတာ …အရည်အချင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ ဆီနဲ့ရေလို့ပြောရမလားပဲ…တစ်ယောက်က သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဘီယာလေးငုံလိုက် ဘော်ဒါတွေနဲ့ ပေါက်ကရပြောလိုက်နဲ့ ငပျင်းဘဲကြီး Lebowski ပေါ့….တစ်နေ့မှာ သူဌေးကြီး Lebowskiရဲ့အိမ်ကို ကြေးစားလူမိုက်နှစ်ယောက်က ဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ ငွေညှစ်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်…ကံဆိုးတာက သူတို့ဝင်တဲ့အိမ်ဟာ နာမည်တူ ငပျင်းငမွဲ Lebowski အိမ်ဖြစ်နေပါတယ်…ဒါ့ကြောင့်စိတ်တိုတိုနဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ကော်ဇောကို သေးနဲ့ပန်းသွားတယ်…ဒါက သန်းကြွယ်သူဌေးLebowskiမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆပြီးတော့ ငပျင်းကြီးဟာ ကော်ဇောအစားတစ်ခုပြန်ပေးဖို့သွားတောင်းပါတယ်… သွားတောင်းစဉ်မှာပဲ သူဟာ ပြန်ပေးဆွဲမှုတစ်ခုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မိပြီးတော့ ပြဿနာအားလုံးဟာ သူ့ခေါင်းပေါ်ကျလာပါတော့တယ်… ဘဲကြီးLebowskiအနေနဲ့ အရှုပ်ထုပ်တွေကြားထဲကနေ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရမလဲ … ဘယ်လိုရုန်းထွက်မလဲ…ဒီကားက imdb ရော Rotten ရော လန်ထွက်နေသလို ဆုပေါင်း ၅ဆုရရှိထားပြီး အခြားဆု ၁၇ဆုအတွက်လည်းဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ထားပါတယ်…. ကားသစ်တစ်ချို့ကြောင့်စိတ်ပျက်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဒီကားကတော့ နင်းကန်မိုက်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ…
IMDB: 8.1/10 702,389 votes
Fallen Fallen(1998) IMDb….7.0 ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာ ယုံကြည်တာလက်ခံထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လက်မခံတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ကိုယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်နေတာတွေအားလုံးက အမှန်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် လက်ခံယုံကြည်ကြမှာလား။ ကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားက မှားနေခဲ့ရင်ရော လက်ခံနိုင်ပါမလား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မင်းသားကြီး မင်းသားကြီး Denzel Washington က ဒီကားထဲမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင် စုံထောက် John Hobb အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်… Hobb က အရမ်းတော်တဲ့စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူနောက်ဆုံးဖမ်းခဲ့တဲ့သူကို သေဒဏ်မပေးခင်မှာ ထူးခြားတာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိမထားမိဘဲ နောက်ထပ်ပုံစံတူလူသတ်မှုတွေပေါ်လာချိန်မှာတော့ ပြန်စုံစမ်းရင်း ထူးခြားတာတွေကိုသတိထားမိလာပြီး သူမယုံချင်တဲ့ အရာတွေကိုလည်း ယုံခဲ့ရတယ်… လူသတ်သမားက သေဒဏ်ကျခံပြီးဖြစ်တဲ့ တရားခံရဲ့ ပုံစံအတိုင်းသတ်ပြီးတော့ Hobb အတွက် သတင်းစကားတွေချန်ထားခဲ့ခြင်းပါ။ အဲဒါတွေကိုစုံစမ်းရင်း သူတစ်ခုသိလာရတာတော့ သူမမြင်ဖူးတဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်မှ ဒီလူသတ်မှုတွေကိုနားလည်နိုင်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ သူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ။စုံထောက်အက်ရှင်ကားတွေလည်းကြိုက်တယ်..မင်းသားကြီး Denzel Washington လည်း ပါတယ်ဆိုတော့ကားးးးးးး…. IMDB Rating အနေနဲ့ကတော့7အထိရရှိထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ D3monပဲဖြစ်ပါတယ်…
IMDB: 7.0/10 71,448 votes
IMDB: 7.3/10 10,517 votes
IMDB: 6.1/10 912 votes